EasyChat maka WhatsApp n'efu maka obere oge | Esi m mac
EasyChat maka WhatsApp n'efu maka obere oge
IHE: N’ime nkeji ole na ole ka ị na-ebipụta akụkọ a, enweghịzi ya maka nbudata na-akwụghị ụgwọ.
Ngwa izi ozi bụ usoro nke ụbọchị ma ole na ole bụ ndị ọrụ taa anaghị eji ihe ọ bụla. NAThe undisputed eze nzi ozi bụ WhatsApp, na-esote Facebook Messenger, n'ụzọ dị ịtụnanya ha abụọ bụ otu onye nwe ya bụ onye ọzọ karịa Mark Zuckerberg, onye nwe Facebook.
Ọnwa ole na ole gara aga, ngwa izipu ozi kwalitere ọrụ weebụ, n'ụzọ dị njọ, site na ihe nchọgharị anyị anyị nwere ike ịnweta mkparịta ụka nkata anyị dị na ekwentị mkpanaaka anyị. Ugbu a n'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ngwa na-enyere anyị aka izere ọrụ weebụ.
Taa, anyị na-ekwu maka EasyChat maka WhatsApp, ngwa na-enye anyị ohere idobe mkparịta ụka anyị na WhatsApp site na Mac anyị. Ngwa a dị maka nbudata kpamkpam n'efu maka obere oge, yabụ hapụ ihe niile ị na-eme ma gbaa ọsọ ibudata ya.
Isi ọrụ nke EasyChat maka WhatsApp bụ:
Ngwa na mfe nnweta WhatsApp site na desktọọpụ anyị.
Soro ndị enyi anyị kparịta ụka, gụnyere nkwado otu.
Anyị nwere ike weghara onyonyo site na kamera anyị iji kesaa ndị enyi anyị.
Ificationsma ọkwa n'ime ngwa ahụ.
Ọ na - enye anyị ohere ịkekọrịta ozi ọnụ na ndị enyi anyị.
Anyị nwekwara ike ịhazigharị nha windo ka o kwekọọ na mkpa anyị.
I gha iburu n'uche na EasyChat maka WhatsApp abughi WhatsApp, ma ọ bụ ya na ụlọ ọrụ mmekọrịta mmekọrịta Facebook. Dị ka web version, iji jiri ngwa a, ọ dị anyị mkpa inwe iPhone anyị ejikọtara na iji batrị zuru ezu maka ọrụ ahụ.
N'agbanyeghị ezigbo arụmọrụ ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ezigbo ngwa izi ozi dakọtara na nyiwe niile, ihe kacha mma i nwere ike ime bụ iji Telegram ọrụ, nke anyị kwurula banyere ya n'ọtụtụ oge na nke nwere ọtụtụ ọrụ karịa WhatsApp.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » EasyChat maka WhatsApp n'efu maka obere oge
Killa anu (@onyinyechi) dijo
Ndewo, ka m batara na Storelọ Ahịa ma ọ bụghị n'efu.
Zaghachi Killa Bee (@onyedikachi_)
Maka mba ndị ọ nwere n'efu?
N'ime ihe niile ma ọ nwekwaghị n'efu, lee anyị anya ọsọ ọsọ mgbe ọ bịara ibipụta ụdị onyinye ndị a, ọbụlagodi na o doro anya na ọ dịla awa ole na ole.
Enwere ngwa ọzọ a na-akpọ Chichat nke na-eme otu ihe ahụ https://www.soydemac.com/chitchat-una-app-para-usar-whatsapp-web-en-nuestro-mac/ Ọ bụghị na Storelọ Ahịa ma ọ bụ n'efu.
O yiri ka anyị na-ebu ọnụ ngwa ngwa maka nke a
Echere m na ọ bụ naanị na-echere!
Zaghachi Andres Gomez
Ugbokodo 1463 dijo
Ọfọn, ọ bụghị n'efu ...
Zaghachi mars 1463
David Fernandez Vila dijo
Nke ahụ abụghị eziokwu, ọ dị na .9,99 XNUMX ugbu a
Zaghachi David Fernández Vila
Enweelarị ezigbo ezigbo ngwa na ngwa n'efu iji lelee WhatsApp na mac. A na-akpọ ya Chitchat
Lee, anyị na-eme ọsọ ọsọ ma a bịa n'ibipụta ụdị onyinye ndị a, n'agbanyeghị nke ahụ, o doro anya na ọ dịla awa ole na ole.
Enwere ngwa ọzọ a na-akpọ Chichat nke na-eme otu ihe ahụ https://www.soydemac.com/chitchat-una-app-para-usar-whatsapp-web-en-nuestro-mac/ Ọ bụghị na Storelọ Ahịa ma ọ bụ n'efu
Lee, anyị na-eme ọsọ ọsọ iji bipụta ụdị onyinye ndị a, n'agbanyeghị nke ahụ, o doro anya na ọ dịla awa ole na ole ... Enwere ngwa ọzọ a na-akpọ Chichat nke na-eme otu ihe ahụ https://www.soydemac.com/chitchat-una-app-para-usar-whatsapp-web-en-nuestro-mac/ Ọ bụghị na Storelọ Ahịa ma ọ bụ n'efu.
Dika Sagutxu si kwuo ihe ozo di. Lee, anyị na-eme ọsọ ọsọ ma a bịa n'ibipụta ụdị onyinye ndị a, n'agbanyeghị nke ahụ, o doro anya na ọ dịla awa ole na ole.
O doro anya na ọ bụ n'efu?
Ndepụta ndepụta nke egwu ebudatara kachasị na iTunes Spain
E jidere maka ojoro nke $ 16.000 na ngwaahịa Apple